Mgbe okooko osisi begonia: nlekọta ụlọ, foto nke osisi na nkọwa, akuku, ọrịa na pests, na ihe mere na ọ dịghị oge ntoju - ihe kpatara ya - Ụlọ, ụlọ - 2020
Iwu ndị isi maka nlekọta nke begonia mgbe ọ bụla n'ụlọ na akuku, nkọwa na foto nke osisi ahụ
Ọ bụrụ na ndị niile na-akụ ya, ọ ga-adị mma ma ọ dịkarịa ala otu ugboro maka ịma mma, ịdị mma, ịdị mfe nke nlekọta, na, n'ezie, na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-atọ ụtọ na agba agba agba.
Enweghị nchekasị na nlekọta na mmeputakwa, mgbe ọ bụla okooko osisi begonia, na-eguzogide ọgwụ ụfọdụ na-emetụ n'ahụ. Ulo dị otú a na windowsill ga-enwe obi uto ọbụna n'ụbọchị nke kachasị njọ.
Isiokwu a na-akọwa iwu ndị bụ isi maka nlekọta nke begonia mgbe nile na ụlọ na akuku ya, nkọwa na foto nke osisi ahụ.
Ịkụ mkpụrụ na transplanting
Na-eto eto n'ụlọ
Na-elekọta mgbe ị zụrụ
Ikekwe pests na ọrịa
Ntak emi ọ bụghị oge ntoju?
Kedu ihe osisi na-ahọrọ?
Okpomọkụ na ọkụ.
Igwe ikuku dị na ọkọchị na n'oge oyi kwesịrị ịdị ogo 20-25 Celsius. Na oge ọkụ, a gaghị ahapụ ya ka ọ ghara ikpuchi akwụkwọ na ị ga-agbanye, na oyi na-atụ usoro mgbọrọgwụ ga-echebe ya site na mkpuchi. Iji oge ntoju bụ n'afọ nile, osisi ahụ chọrọ ụbọchị ìhè nke ọ dịkarịa ala awa 16. Otú ọ dị, n'etiti ụbọchị ọkụ ị chọrọ pritenyat begonia iji zere nsogbu ndị na-adịghị mma.
Ọ dị mkpa ka ọkọlọtọ begonia mgbe ọ bụla, iru mmiri dị elu n'ihi ebe ebe okpomọkụ ya. Otú ọ dị, ịṅụbiga mmiri ókè na-enweghị ike ime ya, ọ nwere ike imerụ osisi - nke a nwere ike ịghọta ebe a na-acha aja aja nke a ga-eji kpuchie ya. Ihe ngwọta kachasị mma bụ ịmepụta mmiri iyi mmiri.
Ọ bụrụ na ọ dịghị onye nkụzi ọkụ eletrik dị n'ụlọ ahụ nke a ga-etinye na nso osisi ahụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ihe ọkpụkpụ nke na-eme ka ọ dị mkpa ifuru maka mmiri. N'elu ihe na-abaghị uru, ị ga-etinye ọkwa nke obere. Wunye pebbles ma ọ bụ gbasaa ụrọ na oghere nke pallet. Na ite ị chọrọ itinye ite na begonia.
Na-ehichapụ drainage oyi mgbe nile, mmiri nke ga-esi na ya pụọ ​​na nso osisi ahụ, nwere ike imeju mkpa maka akwa iru mmiri. Ọ bụrụ na ịnweghị inye nke a, mgbe ahụ, ihe ndị a chọrọ mma nke ifuru ga-agbadata - Atụmatụ nke epupụta ga-akpọnwụ na curl.
Begonia bụ otu n'ime okooko osisi ndị ahụ na-agbanwe agbanwe nke ite ahụ bụ nrụgide ma nwee ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ. Ya mere, ọ dị gị mkpa iji nlezianya mee nhọrọ maka ebe a ga-ahọrọ ma chee na eziokwu ahụ bụ na Begonia hụrụ ọtụtụ ohere n'efu, ọ dịkwa mkpa maka ohere.
Lee ị nwere ike ịhụ foto nke mgbe ọ bụla okooko begonias:
Ọ ka mma ịba n'ala mgbe oge ehihie ga-ezuru - site na March.
Tupu ị kụrụ ọ dị mkpa ịhọrọ akpa ziri ezi. Ọ bara uru ịtụle na mgbọrọgwụ nke osisi ahụ na-eto n'elu, n'ihi ya, ọ ka mma iji ike na-emighị emeri, mana obosara. Ọ ghaghị inwe oghere maka mmiri mmiri.
Debe akwa drainage nke ụrọ gbasaa ma ọ bụ pebbles na ala nke tank.
Ghaa ala, dọọ mgbọrọgwụ ahụ, fesa ala fọdụrụ na ọkwa dị gị mkpa.
Ị nwere ike akụ ọtụtụ osisi n'otu akpa, naanị ọnọdụ dị anya nke 10x10 cm site na ibe ya.
Mmiri mgbe niile ka ala niile wee na-ehicha.
Transplanting bụ akụkụ dị mkpa nke ilekọta osisi ahụ, n'ihi na usoro mgbọrọgwụ Begonias na-arụ ọrụ nke ọma. Ghota mgbe a choro transplantation, mgbe mgbọrọgwụ nke ifuru ga-ahụ site na drainage onu. Ịhọrọ akpa ọhụrụ, i kwesịrị icheta mgbọrọgwụ, nke na-eto eto n'ozuzu.
A na-atụghachite osisi ahụ naanị ná mmalite oge opupu ihe ubi, ebe ọ bụ na enweghi ọganihu.
Jiri nlezianya wepu osisi ahụ site na akpa ochie.
Hichaa usoro mgbọrọgwụ nke ihe ndị fọdụrụ n'ụwa.
Kwadebe ngwọta na-adịghị ike nke potassium permanganate, ma belata mgbọrọgwụ nke osisi ahụ maka minit 30.
Gbanyụọ mgbọrọgwụ osisi, ihe fọdụrụ n'ime mmiri ahụ na-ebute mmiri.
Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na-akụ ihe dị ka atụmatụ mkpụrụ osisi ahụ a kọwara n'elu.
Ụbọchị ole na ole mbụ mgbe transplantation chọrọ ugboro atọ.
Okpokoro osisi nke na-amalite ịhapụ mmetụta ha nwere mmasị, na-ekpughe akụkụ ndị dị ala nke ị ga, enweghị uche na replanting, transplantation agaghị alaghachi ihe niile a chọrọ mma nke ifuru.
Ịgbara na nri.
Agbara osisi na-emepụta dị ka ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ala akpọnwụwo site 1.5 cm, mgbe ahụ, ifuru chọrọ ịgbara. Mmiri maka nke a ga-adị n'ime ụlọ okpomọkụ ma kewapụ. Ọtụtụ ihe dị mkpa maka ọganihu dị mma nke begonia na-aga n'ihu bụ nkwụsị dị elu mgbe niile. Ihe mgbaru ọsọ nke ịgbara mmiri bụ iji gbochie ala na mgbọrọgwụ nke osisi ahụ site na ihichapụ, kamakwa iji zere ịdaba mmiri n'ime ala.
Fatịlaịza bụ akụkụ dị mkpa nke ilekọta begonia mgbe ebighi ebi. N'oge oge e guzobere ovaries, ọ dị mkpa iji nri fatịlaịza phosphate-potassium na-eri nri, ma na-eme ka nri fatịlaịza pụrụ iche maka begonias mmiri mmiri maka nri maka kụrụ.
Ọ bụ ezie na ụdị a, dịka iwu, anaghị eto n'elu 40 cm, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa ka ọ dị mma iji nye ifuru ahụ anya. Ọ bụrụ na osisi amalite na-eto eto jọrọ njọ ma na-enweghị isi, a pụrụ ịhapụ ogologo aka dị ogologo, na ndị nọ nso na isi ahụ, dị mkpirikpi. Ya mere, Begonias gbara gburugburu.
Maka ikuku na-aga n'ihu n'oge oyi, a ghaghị ịhụ otu ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ dịka oge fọdụrụnụ. Ọ bụrụ na nke a adaala, ịkwesịrị inye oge ahụ oge ezumike: megharịa akpa ahụ na begonia n'ebe dị jụụ, ma ọ bụghị ihe na-erughị ogo 12 Celsius - nke a bụ ọnụ ala, okpomọkụ agaghị adị ndụ na osisi ahụ; belata ọnụ ọgụgụ mmiri; belata ego fatịlaịza.
Iji mụta otú e si elekọta otu ụdị begonia - terry, mgbe ọ bụla ị ga - etolite ya na ụlọ na n'okporo ámá, gụọ ya n'isiokwu a.
Ekwesiri ighota na osisi a zoputara kwesiri ibughari onodu ohuru na nani mgbe agaa enwe ike imeghari. Ọzọkwa ọ bụrụ na osisi ahụ a zụrụ akụ na-agba ọkụ, mgbe ahụ, ọ pụghị ịtụgharị ya, ọ dị mkpa ichere ka ọ ghara ịla n'iyi.
Mgbe ị na-emegharị, ịkwesịrị ịkpachapụ anya na mgbọrọgwụ, ntakịrị mmebi nke nwere ike ịkpata ire. Ọ dịkwa mkpa ka ị jiri nlezianya họrọ ala kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịzụta ma kwadebe ya n'onwe gị. O kwesiri:
1/2 ala ala;
1 2 2 peat ma ọ bụ humus.
Ebe ọ bụ na ngwakọta nke ala na-eme ka ọ dị elu, a ghaghị itinye obere ájá na ala nke tank. Mgbe osisi ahụ gasịrị, osisi ahụ kwesịrị mkpa ma na-elekọta ya.
Ọ bụrụ na osisi ahụ na-eto eto, ọ ga-efunahụ ya, uto ya daa ma ọ bụ kwụsị kpamkpam, ọ pụtara na aphid na / ma ọ bụ ududo ududo, nke na-eri nri begonia, amalitela na ya.
Iji kpochapụ aphids, ị nwere ike ịhazi osisi Aktellik ugboro atọ n'otu oge nke ihe dị ka ụbọchị 10. Derris ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ ahụhụ ọ bụla ọzọ ga-adabara mbibi nke anụ ube.
N'ihe banyere ọdịdị nke nematodes, begonia ịchekwa na ọ gaghị ekwe omume, yabụ ị ga-atụba osisi ahụ.
Mgbe ọ bụla okooko osisi begonia n'ụlọ nwere ike ịta ahụhụ site na powdery mildew, oji na agba ntụ ire ere. Ịlụ ọgụ megide ihe ndị a nwere ike ịbụ Quadris ma ọ bụ Bordeaux mmiri mmiri.
Ọdịdị nke ogho odo na-acha akwụkwọ ndụ na-egosi nrịanrịa nke ọrịa ndị dị ka tomato na-ekpocha na tomato kukumba. Ọgwụgwọ dị otú ahụ agaghị ekwe omume.
Ọdịdị na-egbu mgbu nke ifuru anaghị abụ mgbe nile site na mmetụta nke nje bacteria ma ọ bụ pests.. Nke a nwere ike ibute nlekọta na-ekwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ na begonia amalite ịkụ na mberede, ma ọ dịghị ihe ịrịba ama ndị ọzọ a chọpụtara, mgbe ahụ, ọ ga-abụ na enweghi mmiri, ị ga-achọ ịmalite ịgbara mmiri.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị ghara iji ya na-edozi ya - ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri na-adịkarị ụba ma buru ibu, begonia ga-amalite ire ere.
Ndị na-eto eto nwere ahụmahụ na-ekwu na Begonia malitere ịmị okooko ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dịkarịa 5 yiri mgbaaka. Ọ bụrụ na osisi a zụrụ dị ntakịrị, ma ọ bụrụ na ọ na-agbaji, mgbe ahụ, o yikarịrị ka a na-emepụta ihe na-akpali akpali pụrụ iche, ya bụ, okooko ahụ na-emegharị ugboro ugboro ma ọ bụ mgbe osisi ahụ ruru afọ a chọrọ.
Ọ bụrụ na ifuru bụ mgbe nile na ndò, mgbe ahụ nke a bụ ihe ọzọ kpatara enweghị okooko osisi na begonias. Ọ dị mkpa iji mụbaa ìhè ehihie, ma zere izere ìhè anyanwụ.
Ekwesiri ka mmiri na-ekpo ọkụ dịka begonias mgbe niile. Ị nwere ike kpọgidere ákwà nhicha mmiri n'elu radiator (ọkpọkọ) ma ọ bụ tinye ite mmiri na-esote ifuru.
Ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ.
Mmiri kachasị mma n'oge okpomọkụ bụ ogo 20-25, n'oge oyi nke 15. Ọdịiche nke okpomọkụ, ihe ntinye na-eme ka osisi ahụ ghọọ ọnọdụ nrụgide nke okooko osisi agaghị ekwe omume. A ga-ahọrọ ụlọ maka osisi ga-eji microclimate mgbe nile.
Enweghị ma ọ bụ fatịlaịza fatịlaịza.
Ọ bụrụ na vitamin ezughị, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebugharị ya na ala ọhụrụ.
Fertilizing, ịkwesiri ime ihe ụfọdụ, ma ọ bụghị na ị nwere ike ire ọkụ ma ọ bụ redirect ike nke osisi na-eto eto lush nwa.
Anwuru na-ewepu ike osisi niile ka oge ntoju. Site n'oge ruo n'oge ọ dị mkpa iji nyochaa osisi maka ọnụnọ ha ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-emeso ha ihe pụrụ iche.
Ọ bụ ọrụ dị mfe ilekọta ifuru na afọ ahụ na-atọ ụtọ anya na okooko ya. Ihe niile ị chọrọ bụ ịkwụ ụgwọ ntakịrị ma soro iwu.
Maka ndị niile mara mma nke osisi mara mma, anyị kwadebere ihe bara uru banyere ụdị dịgasị iche iche nke begonias dika Elatior. Site na isiokwu anyị, ị ga-amụta otú e si agbasa osisi a, nakwa ụdị nlekọta ọ chọrọ.
Nchekwa oyi maka oyi: uzommeputa maka caviar
Colorado nduku ebe: nkọwa nke a na-enweghị obi ebere pesti nduku ma ọ bụghị naanị
Akụkụ nke uru na uru nke persimmon maka ahụ nwanyị
Ephedra horsetail: ọgwụ ọgwụ, ngwa
Ezịka ugha Yucca: usoro ozuzu, ezigbo akuku
Atụghị egwu nke ifufe na ntu oyi apụl dị iche iche
Onye mba ọzọ si Siberia - nkọwa na aro maka na-eto eto tomato "French Thunderstorm"
Kukumba Libelle: nkọwa na ịkọ
Udi di iche iche "Dessert Morozova": ihe di iche iche, ihe omimi nke ohia nke oma
Njirimara bara uru na oji nke oji
Na-eguzogide nrụgide na okpomọkụ Tomato "ebighebi" F1: nkọwa nke iche iche na àgwà nke na-eto eto
Copyright 2020 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa